In Neymar La Shaqeyn Karo BBC, Hadii Ay Ka Aar Gudan Karaan Girona & Zidane Oo Arimo Xasaasi Ah Ka Hadlay %
Tababaraha kooxda kubada cagta Real Madrid, ninka lagu magacaabo Zidane oo warbaahinta la hadlaya ka hor ciyaarta ay la balansan yihiin Berri oo Axad ah dhigooda Girona, ayaa wuxuu rajo fiican uu ka muujiyay inay ka aargutaan kooxdaan.
Kulanka labadaan kooxood, kaasoo ka tirsan horyaalka labaad ee dunida ugu xiisaha badan, ee ayaa waxaa uu ka dhici doonaa garoonka boqorada wadanka Spain, kaasoo lagu magacaabo Santiago Bernabéu Stadium, islamarkaana ku yaala Magaalada Madrid.
Ciyaartaan oo hadii uu ALLE raali ka noqdo warbixinadeeda aad kala socon doonto Shabakada wararka cayaaraha ee Laacib.so ayaa waxaa laga daawan doonaa marka ay saacadda Geeska Afrika ama Qaaradda Afrika soo dul istaagto 10:45 oo Caweysnimo.
“Horyaalka mar walba waa mid aad u adag, mana jirto koox yar,” ayuu ku jawaabay mar la su’aalay hadii ay ka aargudan karaan Girona, kuwaasoo kulankii horey guul daro dhabarka usoo saariyey difaacadayaasha La Liga.
“Isbuucaan si fiican ayaan ushaqeyney, waxaana soconayaa inaan horey usocono, iyaga waxay ku jiraa sanad ciyaareed fiican marka waan arki doonaa waxa ka dhaca garoonka,” ayuu hadalkiisa kusii daray hogaamiyaha Los Blancos.
Zidane oo la weydiiyay mar kale hadii uu isku-shaandheyn uu sameyn doono, maadaama aysan dheeli doonin Isbuucaan kulan, ayaa wuxuu ku jawaabay: “Waxay ku xiran tahay sida uu ciyaaryahanka udheela guud ahaan xili ciyaareedkan.
“Taasi waa shaqeydeyda, maxaa yeelay waa inaan ka fikiro kulamada muhiimka ah iyo ciyaartoyda aan dheelsiin doono, sababtoo ah hada waxaa naga horeysa Atletico Madrid, marka wax walba oo macquul ah ayaan sameyn doonaa.
Ugu dambeyn, Zidane oo ka hadlay wararka xanta ah ee sheegay in Real Madrid ay lasoo wareegeyso Neymar ayaa wuxuu diiday inuu si toos ah uga hadlo arrintaas – Laakiin waxaa la weydiiyay hadii ay dhaco sida ay kuwa shaqeyn karaan BBC.
Isagoo ka jawaabay arrintaas ayuu ku warceliyay: “Dadku ha dhahaan waxay doonaan, ciyaaryahankay doonan haka hadlaan, laakiin waxa muhiimsan ayaa ah inaan haysano ciyaaryahano, kuwaasoo aan ku qanacanahay.
“Ciyaartoyda fiic-fiican waxay yihiin kuwa ku dheeli kara meel walba, laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah inay muhiim tahay in la helo tartan, taasina ayaa ah saameynta imaan karta,” ayuu hadalkiisa kusii xiray mucalimuu Zidane.
BBCNeymarReal Madrid vs GironaZidane